‘अहिलेको संकट हाम्रो लागि ऐतिहासिक अवसर हो’
‘अहिलेको संकट हाम्रो लागि ऐतिहासिक अवसर हो’ विनायक शाह -प्रथम उपाध्यक्ष, होटल संघ नेपाल
जनतापाटी मंगलबार, मंसिर ३०, २०७७ मा प्रकाशित
कोरोना महामारी नसकिएपनि पर्यटन क्षेत्र त अलि सहज हुंदै गएको छ, व्यवसाय चांही कस्तो छ ?
हो, केही महिना अगाडिको तुलनामा अहिले केही सहजता पक्कै भएको छ । मानिसहरुमा विस्तारै घुमघामको माहौल वन्दैछ । त्यसैले अहिलेको अवस्थालाई हामीले ‘न्यू नर्मल सिचुवेसन’ भन्ने गरेका छौं ।
‘न्यू नर्मल सिचुवेसन’ भनेको के हो ?
कोरोना महामारी शुरु हुनु भन्दा अघिको जस्तो अवस्था छैन । कारोवार त्यसरी बढेको छैन । तर, कोरोना महामारीको शुरु भएपछिका केही महिनासम्म जुन दयनिय अवस्था थियो, त्यसको तुलनामा अहिले अवस्था निकै सहज भएको छ । हामी कहां मात्र होइन, विश्वभरिनै त्यस्तै अवस्था छ ।
नेपालको पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने अहिले हामी सून्य अवस्थामा छौं । कर्मचारीलाई तलव खुवाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । होटल एशोसियनमा आवद्ध होटलहरु र कर्मचारी युनियनहरुबीच डिसेम्बर अन्त्यसम्मको लागि एउटा सम्झौता भएको छ, काममा आउनै नसक्ने कर्मचारीलाई पनि न्यूनतम ४ देखि १० हजार रुपैंया मासिक खर्च उपलब्ध गराउने । काममा आएको अवस्थामा त उसले पहिलेको कम्पनीसंगको सम्झौता अनुसार रकम पाइहाल्छ । काममा आउनै नसकेको अवस्थामा चांही सम्झौता अनुसार मासिक ४ देखि १० हजारसम्म पाउंछ । कस्तो कर्मचारीले कति पाउने भन्ने हामीले एउटा विधि तय गरेका छौं, त्यही अनुसार होटलहरुले कर्मचारीलाई रकम दिंदै आएका छन् ।
तर, कतिपय होटलहरुलाई त केही समय त्यही रकम उपलब्ध गराउन पनि गाह्रो परिरहेको छ । अहिले चांही आन्तरिक पर्यटनले गति लिएको विस्तारै अलिकति स्थिति सहज भएको छ । चितवन, पोखरा जस्ता ठाउंहरुमा त आन्तरिक पर्यटकले नै धानिरहेका छन् ।
विदेशी पर्यटकहरुको आवगमन कहिलेदेखि सहज हुने अनुमान गर्नु भएको छ ?
त्यो हाम्रो भन्दा उनीहरुको देशमा भर पर्छ । अहिले युरोप, अमेरिकाका धेरै देशमा कोरोनाको दोस्रो, तेस्रो लहर शुरु भएको छ । कतिपय देशमा त लकडाउन चलिरहेको छ । मानिसहरु घरबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले युरोप, अमेरिकाको अवस्था सहज नभएसम्म हाम्रो देशमा वाह्रय पर्यटन सहज हुने अवस्था छैन ।
अर्काे विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हाम्रो देशमा विदेशी पर्यटकलाई आश्वस्त पार्ने गरि कुनै काम भएका छैनन् । सरकारले एराइभल भिषा रोकेको छ । एयरपोर्टमा पिसिआर चेक गर्नको लागि कुनै व्यवस्था छैन । घुम्न गएका पर्यटकहरुलाई गाउंपालिका, नगरपालिकाहरुले रोकिरहेका छन् । बाटो छेकेर प्रवेश गर्न नै दिइरहेका छैनन् । उनीहरुले पिसिआरको रिपोर्ट छैन । उनीहरुको हिसाबले त्यो ठीक हो । कोरोना संक्रमित पर्यटक छिरे भने त सिंगै गाउं पालिका, नगरपालिका क्षेत्र नै असुरक्षित हुन्छ । त्यसैले कोरोना चेक गरेर पर्यटकलाई त्यसको प्रमाण दिनु त सरकारको दायित्व हो । सरकारले त्यसबारेमा कुनै काम गरेको छैन । त्यसले गर्दा पर्यटकहरु मात्र होइन, हामी जस्ता पर्यटन व्यवसायीहरु पनि अन्योलमा परिरहेका छौं । सरकारले यस्तो अन्योल अवस्था सृजना गर्नु हुदैन । कुनै पर्यटक नेपाल आउन चाहन्छ भने उसलाई यो योठाउंमा यसरी चेक जांच गरिन्छ, सुरक्षाका मापदण्ड यसरी पालन गरिन्छ भनेर स्पष्टसंग व्यवस्था गरेर कार्यान्वयन गर्ने हो भने त भैहाल्छ नी । यति धेरै अस्पतालहरु छन् । ती मध्ये एउटा अस्पताल विदेशी पर्यटकको उपचारको लागि केन्द्रित गरिएको छ, कुनै पर्यटकलाई केही भयो भने त्यो अस्पतालमा छिटो छरितो तरिकाले उपचार गरिन्छ भनेर सरकारले घोषणा गर्ने हो भने त्यसको सकारात्मक सन्देश विश्वभरी नै जान्छ नी । तर, सरकार खैमा के मा अलमलिइरहेको छ, यस्ता काम भैरहेको छैन ।
पर्यटन मन्त्री योगेश भट्राईले पर्यटन क्षेत्रको उद्धारको लागि निकै काम गरिरहेको बताउँनुहुन्छ, सरकारले केही गरेको छैन ?
पर्यटन मन्त्री र पर्यटन मन्त्रालयले निकै पहल गरेको छ । हाम्रो कुरा सुनिएको छ । तर, सिंगो सरकारको लागि त पर्यटन एउटा सानो क्षेत्र होला शायद । त्यहीकारण सरकारले प्राथमिकतामा पारेको छैन । सरकारको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रवाहेक अहिले अरु कुनै प्राथमिकतामा देखिएको छैन । मन्त्री परिषद्मा छलफलको क्रममा पनि पर्यटन क्षेत्रले महत्व पाउन सकिरहेको देखिदैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्र पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ भन्नेमा त शंकै छैन । पहिले बाँच्नुपर्छ त्यसपछि व्यवसाय गर्नुपर्छ । तर, वांच्नको लागि पनि व्यवसाय त गर्नु पर्यो । धनी देशहरुमा सरकारले नागरिकको जीउ धनको ग्यारेण्टि गर्छ । बेरोजगार भत्ता दिन्छ । लक डाउनकै बेलामा पनि सरकारले खानपानदेखि स्वास्थ्य सुरक्षाको सबै जिम्मा लिन्छ । हाम्रोमा त्यस्तो छैन । त्यसैले जोखिम मोलेर पनि व्यवसाय गर्न बाध्य हुनु परेको छ ।
त्यति हुंदा पनि हामीले सरकारले निर्धारण गरेको, विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको ‘प्रोटोकल’लाई पूर्ण पालना गरेर मात्र काम गर्छाैं भनिरहेका छौं । हाम्रो कारण कुनै किसिमको जोखिम उत्पन्न नहोस भन्नेमा हामी सचेत छौं । तर, सरकारले स्पष्ट ‘प्रोटोकल’ तयार गर्ने र यसरी काम गर त भन्नुपर्यो नी ।
पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि भनेर सरकारले निजामती कर्मचारीलाई भ्रमणमा जान प्रोत्साहनदेखि लिएर अनेक प्रयासहरु गरिरहेको छ, यी प्रयास अपूर्ण छन् ?
मैले अघि भनें पर्यटन मन्त्री र पर्यटन मन्त्रालयले सकारात्मक प्रयास गरिरहेका छन् । हामीसंग नियमित छलफलमा छन् । हाम्रो कुरा सुन्ने, सुनाउने काम भैरहेको छ । तर, सिंगो सरकार खै केमा अलमलिइरहेको छ, बुझ्नै सकिएको छैन । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक भ्रमणमा जान दिने नीति घोषणा गरेको छ । त्यो सकारात्मक छ । तर, कुन तहका कर्मचारीलाई कति दिन भ्रमण गर्न दिने, उनीहरुको लागि अरु सेवा सुविधा के दिने ? जस्ता विषयहरुमा सरकारले केही बोलेको छैन । त्यसले गर्दा त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
अर्काे कुरा सरकारले पर्यटन क्षेत्रको राहतको लागि ५० अर्व रुपैंयाको पुनरुथ्थान कोष घोषणा गरेको छ । त्यो अनुसार ५ प्रतिशत व्याजदरमा पर्यटन व्यवसायीहरुले कर्जा लिन सक्ने घोषणा गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । घोषणा गरेर मात्रै त हुदैन नी, कार्यान्वयन भए पो बल्ल त्यसले परिणाम दिन्छ त । सरकार घोषणा त मज्जाले गर्छ, तर कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान नदिनाले कुनै परिणाम आउंदैन । अहिले त्यही भैरहेको छ ।
सरकारले एकातिर साधन स्रोत अपुग छ, पैसा छैन । तर अर्काेतर्फ भएको साधन स्रोतको परिचालन तर्फ ध्यान नै दिन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा अर्वाैं रकम छ । त्यहांको रकम अहिलेको संकट व्यवस्थापनमा खर्च गरिनुपर्ने होइन ? त्यो रकम यस्तै अवस्थाको लागि भनेर जम्मा गरिएको होइन ? तर, कोषको रकम प्रयोग गर्नै नहुने हो कि भनेर खातामा थुपारिएको छ ।
कोरोना महामारी अगाडी र महामारी शुरु भएपछि अहिलेको अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ठ्याक्कै के परिवर्तन भएको छ ?
अब निकै परिवर्तन हुन्छ । हाम्रो देशमा मात्र होइन, विश्वभरकै पर्यटन उद्यममा परिवर्तन आउंछ । खानपान र रहनसहन प्रति मानिसहरु सचेत भएकोले त्यसको सोझो असर पर्यटन उद्योगमा पर्छ । सरकारले अलिकति ध्यान दिने हो भने अब हाम्रो पर्यटन उद्योगले फड्को मार्न सक्छ । किनकी हाम्रो प्राकृतिक वातावरण नै त्यस्तो छ । नेपालको जस्तो भौगोलिक बनावट भएका देश अरु छैनन् । त्यसैले विश्वका धनी मानिसहरुको लागि हाम्रो देश मुख्य आकार्षणको ठाउं बन्न सक्छ । अहिलेकै अवस्थामा पनि अरबदेखि युरोप, अमेरिका सम्मका प्राइभेट जेटवालाहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्यको अनुकूलताको लागि पनि हाम्रो देश पर्यटक मैत्री छ । हाम्रा मौलिक खानपानहरु त्यस्तै छन् । त्यसैले सरकारले ध्यान पुर्याउने हो भने अहिलेको संकट हाम्रो लागि ऐतिहांसिक अवसर हो । तर, त्यसको लागि सरकारले गर्नु पर्ने स्वस्थ्य सुरक्षादेखि लिएर न्यूनतम कामहरु त गरिदिनु पर्यो नी ।
नेपालको पहिलो विकेट पतन ४ मिनेट पहिले
अफगानिस्तानलाई बाहिरबाट नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन : इमरान खान १४ मिनेट पहिले
स्वास्थ्य शाखा प्रमुखबाटै सहकर्मीमाथि हातपात २२ मिनेट पहिले